सुरक्षालाई चटारो !
प्रकाशित : बिहिबार, असार १९, २०७६२१:३४
फिल्म । अभिनय गर्ने शिलशिलामा सुरक्षा पन्तको नाम अगाडी आउने गर्छ । उनले आफुले पाएको भूमिकालाई निर्वाह गर्न र जीवन्त देखाउन हरप्रयास गर्ने गर्छिन् । भलै , केहि समय अगाडी उनि एक कमेन्टका कारण चर्चामा आइन । यिनै सुरक्षालाई यतिबेला चटारो परेको छ । उनको मुख्य अभिनय रहेको फिल्म ‘घर’ आउँदो साउन ३ बाट प्रदर्शनमा आउंदैछ ।
यहि समयमा उनको फिल्म ‘आमा’ फलोरमा छ । निर्माण कम्पनि डिएस डिजिटल एकै भएकोले उनले ‘एक्सक्युज’ त पाएकी छिन् , तर चटारो त छदैछ । अर्पण थापाको निर्देशनमा तयार फिल्म ‘घर’ मा दीपेन्द्र के खनाल पनि निर्माताको रुपमा छन् । तर, खनाल भने फिल्मकी हिरोइनसमेत लिएर आमाको सुटिङमा लागेका छन् ।
फिल्ममा पानी परेको दृश्य धेरै भएकोले यस समयमा छायाँकनमा गएको ‘आमा’ युनिटको भनाइ छ । तर , पनि रिलिज हुन लागेको फिल्मलाई पर्याप्त ध्यान नदिएर नयाँ फिल्मको सुटिङमा हिड्नुको अर्थ चैं के होला ? सुरक्षाले नै जानुन् ।
थाहा पाउनुस आमिरको फ्लप फिल्म !
‘मुन्ना भाइ ३’ मा सोनाम ?
‘मनको पिर बिसाउने’ सार्वजनिक (भिडियो)
जेनिफरलाई ‘नोकरानी’ भनेपछि
जनवरीदेखि चुरीफुरी डटकम
ताप्सी भन्छिन् ‘बदला हेर्न दिमाग चाहिन्छ’
दीपकको फिल्म हेर्न पुगे अशोक
‘डिप्रेशनबाट उठेका सुशील’
धरानमा हुने चलचित्र महोत्सवबाट बोर्ड बाहिरियो
‘छ माया छपक्कै’ को स्पेसल शो (फोटो फिचर)
Chha Maya Chhapakkai Special Screening
‘फिल्मले नै जवाफ दियो’
घामड शेरे ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
इमेल : Email:jayhosmediapvtltd@gmail.com